Resaka afrikana nataon'i Oumou Bah - Afrikhepri Fondation
Fifandraisana AFRICAN CUISINE
AFRIKHEPRI: Iza moa i Oumou Bah? Nahoana ianao no nanoratra ny boky "Afrikana Afrikana"?
Oumou Bah: Izaho dia Gineana monina any Thailand. Ny fitiavako ny sakafo dia nanosika ahy hanamboatra tranokala, tranonkala ahafahako mizara ireo resiko amin'ny alàlan'ny fanoratana sy horonan-tsary.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nahitam-pahombiazana lehibe ny tranokalako nahandro sy ny pejy Facebook, an-tampon'ireo lahatsoratra azoko isan'andro, ny ankamaroany dia avy amin'ireo olona nijery raha namoaka boky fandrahoan-tsakafo aho. Taorian'izany rehetra izany no nanapahako hevitra hanoratra ny boky "Masakan Afrikanina".
AFRIKHEPRI: Heverinao ve fa ny fahalalana ny fomba mahandro sakafo Afrikana dia manan-danja amin'ny vehivavy afrikana?
Oumou Bah: Aleoko lazaina hoe eny, manoloana izany, satria ho an'ny mponina ao Afrika, ny mahandro dia ny ankamaroany dia heverina ho asa fiasa manokana. Avy eo dia ny fomba anomezan'ireo zokiolona ny kolontsainy amin'ny ankizy.
AFRIKHEPRI: Ahoana ny hevitrao momba ny vehivavy afrikana izay tsy mahafantatra ny fomba handraisana ny sakafo amin'ny firenena?
Oumou Bah: Fantatro fa ny fahafahana hianatra ny fomba fisakafo dia miovaova amin'ny fianakaviana amin'ny fianakaviana. Raha ny sasany mianatra ny mahandro dia vao maraina be, amin'ny hafa dia tsy izany no izy. Mba hamaliana ity fanamby ity dia ampirisihiko izy ireo hikaroka ireo boky amin'ny bokim-bokatra hita any amin'ny mpivarotra boky sy fikarohana amin'ny Internet. Satria ny fianarana ny fomba handraisana ny menônan'ny firenenao dia fomba iray hafa hanehoana ny kolontsainao.
AFRIKHEPRI: Araka ny anao, ahoana no ahafahan'ny sakafo Afrikana atao amin'ny fifohazan'ny vehivavy Afrikana?
Oumou Bah: Ankehitriny dia manana filoham-panjakana vehivavy i Afrika, ireo vehivavy lohandohan'ny governemanta sy ireo vehivavy mpandraharaha ara-barotra dia nanaiky eran'izao tontolo izao, mieritreritra aho fa fotoana tsara ny hananana vehivavy chefs izay manana laza mihoatra noho ny borders of the continent. Tahaka ny kafe hafa, ny sakafo Afrikana dia manana ny toetra manokana, ny soatoavina sy ny tsiambaratelo; Ny vehivavy Afrikana, araka ny nolazaiko teo aloha, dia manana andraikitra hanafaka amin'izao tontolo izao ny lafiny telo izay vao noteneniko.
AFRIKHEPRI: Afaka manome toro-hevitra amin'ny vehivavy Afrikana te-hianatra ny sakafo Afrikana ve ianao?
Oumou Bah: Amin'ny andro taloha, ny hianatra ny fomba handrahoana, dia tokony hiaraka amin'ilay olona mampianatra anao ianao. Soa ihany fa nivoatra izao tontolo izao noho ny fahasambaran'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny fidirana amin'ny aterineto mba hijerena ny karazana sakafo tianao hianarana. Afaka manao ny zava-drehetra irery ao an-trano ny olona rehetra miaraka amin'ny doka tsara. Ny tranonkala recettesafricaine.com ohatra, feno resipeo zato, afrikanina rehetra, miaraka amina fanazavan-tsary. Ho an'ireo vao manomboka dia mila manomboka amin'ny resipeo tsotra aloha izy ireo ary mandrefy ny habetsaky ny fampiasana azy ireo hialana amin'ny fako. Any ianao no mandeha, tsotra be izany.
Tena mora ny mianatra manamboatra ny androany, tsy maintsy te hanao izany fotsiny ianao. Azony atao ny manara-baovao amin'ny aterineto. Ny tranokalako recettesafricaine.com dia ohatra tsara, manana resipeo afrikanina 150 eo ho eo izahay ary resipeo maro no arahin'ny horonantsary.
Misaotra an'ity tranonkala ity izahay: www.recettesafricaine.com ary Chef Oumou Bah noho ny resadresaka nataony.
Sintoma avy amin'ny Atelier de Oumou, Boky 1: Fomba tsotra sy mahafinaritra
Vidio € 30,00
Nohavaozina farany tamin'ny 10 aprily 2021 9:37 maraina
Ny fomba fahasambarana japoney (Audio)
Mitovitovy amin'ny Papyrus Ani sy ny Fitsarana Farany